Uyeke ubumeli eqala ibhizinisi
UNKSZ Zamanyambose Mthethwa ongumphathi wenkampani yezokukhangisa neyezokuvakasha iMcLaw Promotions neMcLaw Travels Isithombe: SITHUNYELWE
Thokozani Ndlovu | March 3, 2021
UKUNYUKA kothando lwezokukhangisa kuphoqe ukuthi ayeke ukufundela ukuba wummeli agxile ebhizinisini, uNksz Zamanyambose Mthethwa (25) ongumphathi wenkampani iMcLaw Promotions neMcLaw Travels.
Uthe ukuvela kwekhono lwezokukhangisa esenza unyaka wesibili ezifundweni zobumeli e-University of KwaZulu-Natal (UKZN), kwenze wangacabanga kabili kodwa wavele wasungula inkampani yakhe osekuyiyona aziphilisa ngayo manje.
Uthe waqala iMcLaw Promotions ngo-2016 esebenzisana namaciko aseThekwini okwenza wathatha isinqumo sokugxila kuleli bhizinisi.
“Ngiwumuntu okhule evele ethanda ukusebenzisana nabantu ngoba nasesikoleni samabanga aphezulu bengiba wumphathi wezinhlelo emicimbini yesikole.
Bekwaziwa nje ukuthi uma kunomcimbi yimina ozobe ephethe uhlelo. Kukhona nesikhathi lapho ngaze ngenzela khona umama, uGcina Mhlophe, inkondlo efike esikoleni.
Lokho kwenza ngagqama kakhulu. Nasenyuvesi bengiwumuntu okwazi ukuxhumana nabantu kalula nokwenze bathi kumele ngingene ophikweni lwezokukhangisa,” kusho uZamanyambose.
Uthe waqala enyuvesi ngo-2015, wabe esesungula inkampani ngo-2016. Ngesikhathi ebona ukuthi kuyasebenzeka, uthathe isinqumo sokuthi agxile enkampanini yakhe nokwenze yathuthuka yafika kuleli zinga esikulona manje.
Ngo-2019, uthe ubonile ukuthi kumele ayikhulise inkampani wase evula iMcLaw Travels esiza ukuhlelela abantu uhambo lokuya kwamanye amazwe nokukhangisa ezokuvakasha njengoba esebenzisana noMasipala waseMhlathuze.
“Ngesikhathi ngiqala iMcLaw Travels ngo-2019, ngihlangabezane nenkinga yokuthi iNingizimu Afrika ibisiya kuthaqa, nangempela kwavalwa ukuhambela amazwe.
“Ngenhlanhla siqale uhlelo lokukhangisa ngezindawo ezingamagugu noMasipala uMhlathuze njengoba kumanje simatasa ngokuhlela ezokuvakasha lapho sisuke sikhangisa khona ngeKing Cetshwayo nokuqwala izintaba. Sifundisa abantu nangokubaluleka kwemvelo,” kuqhuba yena.
Uthe ngesikhathi eqala ukuthola umsebenzi wezokuvakasha uhlelele abantu ukuya eNseleni Nature Reserve, kwase kuba ukuhambela izindawo eziningi ezingamagugu zaseKing Cetshwayo.
Uthe baphinde bahlelele izivakashi amaCamp ukukhangisa ngezindawo ezinhle kule ndawo.
Uthe neMcLaw Promotions iyasebenza kodwa akathandi ukudalula amakhasimende akhe njengamanje kodwa uthe ubuye enze nemicimbi kahulumeni.
Ngaphandle kokusebenzela eKing Cetshwayo, uthe usezinhlelweni zokuthi inkampani yakhe isabalale iye nakwezinye izindawo.
Uveze ukuthi izinto zihamba kahle kuyona njengoba enabasebenzi abayisithupha abaqashwe ngokugcwele kuyona nabane abaseyitoho.
Uthe amakhasimende abo axhumana nabo ngezingcingo nangezinkundla zokuxhuma nama-email ngenxa yokuthi abanalo ihhovisi abasebenzela kulona.
Uthe ihhovisi akuyona into abayidinga kakhulu njengamanje ngenxa yokuthi izinto eziningi bayakwazi ukuzenza besebenzisa i-internet kanti nokuhlasela kweCovid-19 kubafundisile ukuthi ukusebenza online yikhona osekuzoba yikusasa lawo wonke umuntu.
Kuyena okubalulekile ukuthi inkampani yakhe ibhaliswe ngokusemthethweni nokuthi amakhasimende abo ayaluthola lonke usizo aludingayo.
Ekhuluma ngempilo yakhe uZamanyambose, uthe ungowaseMpangeni. Uzalwa nguNksz Zenzekile Ntuli noMnuz Makhosonke Mthethwa. Amabanga aphansi uthe uwaqale eMpangeni Prep School waqeda u-matric eMpangeni High School ngo-2014. Uyingane yesine ezinganeni zakubo ezinhlanu.
Kafushane ngoNksz Zamanyambose:
–Uthanda ukudla amadumbe namantongomane aphuze iCoca Cola
–Ubenezinhlelo zokuvakashela eZanzibar nyakenye waphazanyiswa ukuvalwa kwezwe
–Into emphatha kabi ukungathenjwa kwabesifazane abenza kahle ebhizinisini bese kuba nezinsolo zokuthi kukhona owesilisa omnika imali
–Ukuxhumana kalula nabantu uthi kwenza umsebenzi wakhe uhambe kahle
–Uma engematasa nomsebenzi, uthanda ukuzikhipha yedwa aye endaweni yokudla
–Unesifiso sokuba neFord Ranger
–Akakukhonzile ukubuka ithelevishini kodwa ungumlaleli woKhozi FM
–Emculweni ukhonze iDeep House
–Akaluqali usuku engathandazanga